Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : Matahotra an’i Macron ve ny mpitondra malagasy ?
Inty sy nday : Matahotra an’i Macron ve ny mpitondra malagasy ?
Ao anatin’ny fotoana anentanan’ny fitondram-panjakana ny vahoaka Malagasy haneho firaisan-kina sy fiombonam-kevitra momba ny fitakiana ny famerenan’i Frantsa amin’i Madagasikara an’ireo Nosy Malagasy manodidina ny eto Madagasikara amin’izao fotoana. Ny faha-9 desambra izao, ary haharitra telo andro no hatao ny fakan-kevitra nasionaly eny Ivato. Ny fikambanana Otrikafo sy ny mpiara-dia aminy koa dia manentana ny Malagasy rehetra ny faha-12 desambra mba ho avy eny amin’ny kianjan’Ambohijatovo hanamafy izany rehetra izany satria io faha-12 desambra io no mitsingerina ny faha-40 taona nivoahan’ilay fehin-kevitry ny Firenena Mikambana izay milaza ny maha-an’ny Malagasy an’ireo Nosy bodoin’I Frantsa ireo.
Tamin’ny alakamisy teo indray izao dia namoaka teny miendrika fihantsiana indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa “hametraka foibem-pikarohana momba ny harena voajanahary sy ho fiarovana ny tontolo iainana ao amin’ireo nosy Malagasy ireo”. “Iles Eparses” hatrany noa no voambolana ampiasain’i Frantsa fa tsy te hahalala mihitsy ny maha-an’ny Malagasy azy ireo ry zareo.
Mody ampandrian’i Emmanuel Macron adrisa ny tso-dahy sy tso-bavy hoe mba hahafahana mitrandraka maharitra nefa ahitam-pahombiazana an’ireo harena voajanahary ao andranomasin’ireo Nosy ireo sy ny ankibon’ireo Nosy ireo dia ilaina ny mametraka lamina momba ny rafitra antsoina hoe “écosystèmes” ao.
Ny maro dia mahita fa mbola fihantsiana iray koa taorian’ilay hoe “eto Frantsa isika izao” (ici, c’est la France) raha niditra ankeriny tao amin’ilay Nosy Glorieuse i Emmanuel Macron, volana vitsy lasa izay.
Fihantsiana indray io tamin’ny alakamisy io. Dia toa mangina ny mpitondra Malagasy. Toa mitady hihemotra aza.
Izahay tsy miteny hoe “rehefa anaovana fihantsiana dia ndeha avy dia mamaly bontana”. Tsia. Mba manamafy ny fanentanana ny vahoaka kosa e! Mba miezaka manome toky sy antoka ny ambanilanitra fa tsy hivadika amin’ny hevitra efa iombonan’ny Malagasy dia ny hoe “averin’i Frantsa amin’ny Malagasy ireo nosy isan’ny silak’i Madagasikara ireo”. Mba manao ny fomba rehetra tsy hiraviravezan’ny vahoaka tanana e! Aza avela hitsiry ao anatin’ny fisaina’ny Malagasy ny hoe “toa mitady hiova hevitra ny mpitondra” na koa hoe “aoka tsy handraraka ilo mby andoha isika Malagasy fa efa antsika hatrizay io fa i Frantsa no mibodo an’ireo”…. Sy ny sisa e!
Soa fa misy ny fikambanana sy vondron’olona hafa, izay miezaka mandrakariva manentana sy manazava ny saim-bahoaka, na hanao ny mpitondra na hanao ala safay na hihatsaravelatsihy fotsiny amin’ny vahoaka.
Tolona iombonan’ny firenena no hatao hahafahana miantoka ny famerenaa an’ireo Nosy ireo amintsika Malagasy ka raha matahotra an’i Macron ny mpitondra Malagasy dia avelao izy sy i Macron hanao izay heverin-dry zareo fa mahadiavolana ny sainy any fa isika vahoaka tokony hanana ny lamina matotra mifanandrify amin’ny foto-kevitra tokana, dia ny hoe “antsika Malagasy ireo Nosy ireo ka takiana ny fialan’i Frantsa mpibodo tanin’olona ao”. Raha ny fihodinkodinana amin’ny fitakiana ny fialan’i Frantsa amin’ireo Nosy ireo no hampiombona ny hevitra ny vahoaka, zinona izay mpitondra fanjakana manodidina ny zato raha betsaka indrindra?
Tsy ny hifanavaka eto anefa no tanjona fa ny hampitovy ny feon’ny Malagasy rehetra, na mpitondra na vahoaka, ary mpirahalahy mianala ny vahoaka sy ny mpitondra, ny mpitondra tokin’ny vahoaka ary ny vahoaka andrin’ny mpitondra. Ny ankoatra izay, zavatra hafa.